Wholesale Inotakurika Inonhuhwirira Tin Chipo Makenduru neakasikwa soya wakisi fekitori uye vagadziri | Winby
Anotakurika Anonhuhwirira Tin Chipo Makenduru ane echisikigo soya wakisi
100% NZVIMBO WAX - Yakagadzirwa ne100% yakachena soy wakisi. Ipa yakachena, yakareba kupisa. Kunyangwe kupisa uye pasina hutsi hutema, hunowedzera hutano, husina kukuvadza kumuviri wemunhu uye nharaunda. Ipa iwe yakachena kupisa uye inogara-refu maawa anonhuwirira mufaro.
Ivo akakodzera kune chero zororo kana chiitiko chakakosha, senge Zuva reValentine, Zuva raamai, zuva rekuzvarwa, zororo, mhemberero.
Aromatherapy kenduru inobvisa iyo isingafadzi kunhuhwirira uye isingadiwe hwema isingabudirire, chengetedza mweya wakachena uye mutsva. Yakakura yekusunungura kushushikana.
Kukura: 6.2cm (Upamhi) * 5 cm (Kureba)
Yakawanda-isina hutsi isina huni yakanaka inopisa mini soy wakisi gaba kenduru
Makenduru aya akavharwa nechitarisiko chakanakisa, zvakakunakira kuti utakure uchitenderera kwese kwaunoenda!
Kugadzira manzwiro ekusimudzira mamiriro ekunze uye kutandara iwe nevashanyi, zvakare inoita icho chakakodzera chipo kune chero chiitiko!
Midziyo yemakenduru yakanakisa, sutu yekushongedza imba yako kana chengetera tumwe tudiki twakamboshandiswa kumusoro.
Semuenzaniso sevhisi inowanikwa.
Mashoko Tin inogona + parafini wakisi / soya wakisi + donje wick + simbi muvharo
Saizi 6.2cm (Upamhi) * 5cm (Kureba)
Huremu hwese 95g
Pashure: Empty Kenduru zvirongo zvekugadzira makenduru
Zvadaro: Yakashongedzwa chakra inonhuhwirira makenduru e soya nemakristani arimo
Yakakwira Hunhu hwekunhuhwirira Kenduru
Yakakwenenzverwa girazi chirongo chinonhuhwirira kenduru ne bamboo muvharo
girazi rinoonekera rinonhuhwirira kenduru
matatu wicks anonhuwirira echisikigo soya wakisi kenduru